प्रार्थना - साँचो बाइबल सिद्धान्त
नोभेम्बर २८, २०२१ मार्च १,, २०२१ द्वारा btolbert
"भगवान मात्र पहाड सार्न सक्नुहुन्छ, तर विश्वास र प्रार्थना भगवान सार्न सक्नुहुन्छ।"
क्यालिफोर्निया मा हाम्रो गाना बजाने को किताबहरु मध्ये एक मा यो गीत बाट उद्धरण हामीलाई याद दिलाउँछ कि त्यहाँ थोरै विश्वास मा महान शक्ति छ जब भगवान हामी संग हुनुहुन्छ। विश्वासको बारेमा येशूले के भन्नुभएको थियो हेरौं।
"२० र येशूले उनीहरुलाई भन्नुभयो, तिम्रो अविश्वासको कारणले: साँच्चै म तिमीहरुलाई भन्दछु, यदि तिमीहरु राईको दानाको रूपमा विश्वास गर्छौ भने, तिमीले यो पहाडलाई भन्नु पर्छ, यता उता बाट हटाउनुहोस्; र यो हटाइनेछ; र तपाइँलाई केहि असम्भव हुनेछैन "
हामी शास्त्रमा देख्छौं कि येशूले भन्नुभयो हामीलाई मात्र पहाड सार्न राईको बीउ को एक दाना को रूप मा विश्वास को आवश्यकता छ। तोरीको बीउ धेरै सानो छ। प्रार्थना को लागी काम गर्न को लागी हामी शुरू गर्न को लागी विश्वास को एक सानो मात्र आवश्यक छ। विश्वास एक विश्वास हो जुन तार्किक प्रमाण वा भौतिक प्रमाण मा आराम गर्दैन।
"११ अब विश्वास आशा गरिएका चीजहरुको पदार्थ हो, नदेखेका कुराहरुको प्रमाण।"
विश्वासले असम्भव बनाउँछ किनकि यसले भगवान लाई हाम्रो लागी लिन्छ र भगवान संग केहि असम्भव छैन।
"२ And र येशूले उनीहरुलाई हेरेर भन्नुभयो, मानिसहरु संग यो असम्भव छ, तर भगवान संग छैन: भगवान संग सबै कुरा सम्भव छ।"
विश्वास उत्पादन र प्रार्थना संग संयोजन मा काम गर्दछ। म दृढ विश्वास गर्दछु यदि हामी विश्वास संग प्रार्थना गर्छौं र भगवान हाम्रो प्रार्थना को जवाफ दिनुहुन्छ, हाम्रो प्रार्थना जीवन र विश्वास बलियो हुन्छ। युवाहरु को रूप मा हामी बुझ्न को लागी विश्वास को कमी गरीब प्रार्थना जीवन को मूल मा पाईन्छ। अन्य शब्दहरुमा, यदि हामी भगवान संग प्रार्थना गर्दैनौं, हाम्रो विश्वास सानो हुनेछ। जब अन्तिम पटक तपाइँ भगवानलाई प्रार्थना गर्नुभयो र उहाँलाई सोध्नुभयो कि तपाइँलाई मद्दत गर्न? अन्तिम पटक जब तपाइँ एक आत्मा बचाउन को लागी प्रार्थना गर्नुभयो? जब अन्तिम पटक तपाइँ तपाइँको प्रार्थना को जवाफ दिन भगवान को लागी रोएर दुई मिनेट भन्दा बढी बिताउनुभयो? के तपाइँको प्रार्थना जीवन कमजोर भयो र पछि भगवान मा तपाइँको विश्वास पनि कमजोर छ? भगवान हाम्रो प्रार्थना को जवाफ दिन चाहानुहुन्छ, तर हामी प्रार्थना मा भगवान को लागी हाम्रो निवेदन ल्याउनु पर्छ। यो केहि हामी युवाहरु को रूप मा जान्न को लागी आवश्यक छ; जब हामी एक स्थितिमा छौं कि हामी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं, हामी विश्वास हुनु पर्छ कि हामी मद्दत को लागी भगवान सम्म पुग्न सक्छौं।
अब्राहाम को बारे मा सोच्नुहोस् जब उनी लूत को लागी सदोम र गोमोरा बाट बचाउनको लागी प्रार्थना गर्न गए।
उत्पत्ति 18: 23-33
२३ अनि अब्राहाम नजिकै गए, र भने, के तिमी दुष्ट संग धर्मीलाई पनि नष्ट गर्छौ?
24 शहर मा पचास धर्मी हुन को लागी साहसिक: के तपाइँ पनी पचास धर्मीहरु को लागी ठाउँ लाई नष्ट गर्न र छोड्नुहुन्न?
25 यो दुनियाँ संग धर्मी को हत्या गर्न को लागी यस तरीकाले गर्न को लागी तिमी बाट टाढा छ, र धर्मी दुष्ट जस्तै हुनु पर्छ, कि तिमी बाट टाढा हुनु पर्छ: के सारा पृथ्वी को न्यायाधीश ठिक छैन?
26 र प्रभुले भन्नुभयो, यदि म सदोम शहर मा पचास धर्मी भेटे, तब म उनीहरुको खातिर सबै ठाउँ छोड्नेछु।
२ And अब्राहमले जवाफ दिए र भने, अब हेर, मैले प्रभुसँग बोल्ने जिम्मा लिएको छु, जो धुलो र खरानी मात्र हुन्।
२ Pe त्यहाँ पचास धर्मीहरु मध्ये पाँच को अभाव हुनेछ: के तिमी पाँच को अभाव मा सारा शहर लाई नष्ट गर्ने? अनि उसले भन्यो, यदि मँ त्यहाँ पैंतालीस देखेँ, म यसलाई नष्ट गर्दिन।
२ And अनि उसले उसलाई फेरी बोली, र भन्यो, "त्यहाँ चालीस जना भेटिन्छन्। र उसले भन्यो, म यो चालीसको खातिर गर्दिन।
30 अनि उसले उसलाई भन्यो, ओह प्रभु रिसाउनु हुन्न, र म बोल्नेछु: त्यहाँ तीस जना भेटिन्छन्। र उसले भन्यो, म यो गर्दिन, यदि मँ त्यहाँ तीस भेटेँ।
३१ र उसले भन्यो, हेर, अब म प्रभु संग बोल्ने मेरो जिम्मामा लिएको छु: त्यहाँ पचास जना त्यहाँ भेटिन्छन्। र उसले भन्यो, म यसलाई बीस को खातिर नष्ट गर्दैन।
३२ र उसले भन्यो, ओह प्रभु क्रोधित नहुनुहोस्, र मँ यो मात्र एक पटक मात्र बोल्नेछु: पेराडभेन्चर दस त्यहाँ भेटिनेछन्। अनि उसले भन्यो, म यसलाई दसको खातिर नष्ट गर्दिन।
३३ र अब्राहाम संग कुराकानी छोडने बित्तिकै प्रभु आफ्नो बाटो लाग्नुभयो: र अब्राहम आफ्नो ठाउँमा फर्किए।
हामी लूत, अब्राहामका भतिजा आफैंलाई एक साँच्चै नराम्रो अवस्थामा राखे। अब्राहम भगवान संग जाने र उहाँलाई ठूलो चीजहरु को लागी सोध्ने विश्वास थियो। मलाई लाग्दैन कि यो पहिलो पटक अब्राहम प्रार्थना मा भगवान संग कुरा गरीएको थियो। म विश्वस्त छु कि भगवान एक नाम को आधार मा अब्राहम जान्दछन्, किनकि हामी पनि धर्मशास्त्र मा भगवान अब्राहाम को कुरा सुन्नुभएको थियो। अब्राहाम प्रार्थना गर्ने मानिस थिए।
मोशा र इस्राएली जनतालाई बचाउनको लागी परमेश्वरसंग गरेको निवेदनको बारेमा के? प्रत्येक पटक जब इस्राएलीहरूले भगवानको आज्ञा पालन गरेनन् मोशा परमेश्वरको अगाडि उनको अनुहारमा परे र प्रार्थना गर्न थाले। मोशा प्रार्थना गर्ने मानिस थिए।
प्रस्थान ३२: ११-१४
"11 र मोशाले परमप्रभु उसका परमेश्वरलाई बिन्ती गरे, र भने," हे प्रभु, तिमीहरुको क्रोध किन तिम्रा मानिसहरु बिरुद्ध तातो हुन्छ, जसलाई तिमीले ठूलो शक्ति र शक्तिशाली हातले मिश्र देश बाट बाहिर ल्याएका छौ?
12 तेसैले मिश्रीहरु किन बोल्नु पर्छ, र भन्नु पर्छ, दुष्टता को लागी उहाँले उनीहरुलाई बाहिर ल्याउनु भयो, पहाडहरुमा मार्न को लागी, र उनीहरुलाई पृथ्वी को अनुहार बाट भस्म गर्न को लागी? तेरो भयंकर क्रोध बाट फर्क, र तिम्रा जनता को बिरुद्ध यस दुष्ट को पश्चाताप।
13 अब्राहाम, इसहाक, र इस्राएल, तिम्रा सेवकहरुलाई याद गर, जसलाई तिमीले आफ्नो वचन दिएका थियौ, र उनीहरुलाई भने, म तिम्रो बीउलाई स्वर्गका ताराहरु जस्तै बढाउनेछु, र यो सबै देश जसको बारेमा म बोलेको छु, म उनीहरुलाई दिनेछु। तेरो सन्तान, र उनीहरु सदाको लागी यो विरासतमा पाउनेछन्।
14 अनि परमप्रभुले आफ्ना मानिसहरु लाई गर्ने दुष्टको पश्चाताप गर्नुभयो। ”
बाल को अगमवक्ताहरु संग पहाड मा एलिया को बारे मा? याद गर्नुहोस् बालका अगमवक्ताहरु आफ्नो भगवान को ध्यान प्राप्त गर्न को लागी सबै दिन कोसिस गरे। अगमवक्ताहरु चारैतिर नाचे, र आफैंलाई काट्यो, तर उनीहरुका भगवानले जवाफ दिएनन्। अर्कोतर्फ, एलिया प्रार्थना संग परमेश्वर संग एक सम्बन्ध थियो।
१ राजा १:: ३-3-३
३ 37 हे मेरो प्रभु, मेरो कुरा सुन्नुहोस्, कि यी मानिसहरु जान्दछन् कि तपाईं प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ, र तपाईंले उनीहरुको हृदय फेरी फर्काउनु भयो।
38 तब परमप्रभुको आगो भत्कियो, र जलेको बलि, काठ, र ढु्गा र धूलो भस्म भयो, र खाडलमा रहेको पानी चाट्यो। ”
म पक्का छु कि भगवानले एलियाको आवाज थाहा पाउनुहुन्थ्यो जब उसले प्रार्थना गर्यो, किनकि एलियाले लगातार भगवान लाई प्रार्थना गरे। तेसैले, जब एलियाले प्रार्थना गरे भगवानले सुन्नुभयो र उहाँको प्रार्थनाको जवाफ दिनुभयो।
1 यहूदाका राजा यहोयाकीमको शासनकालको तेस्रो वर्षमा बेबिलोनका राजा नबूकदनेसर यरूशलेममा आए, र त्यसलाई घेरा हाले।
२ अनि परमप्रभुले यहूदाका राजा यहोयाकीमलाई उसको हातमा दिनु भयो, परमेश्वरको मन्दिरको भाँडाको अंशको साथमा; जुन उसले शिनारको भूमिमा उसको देवताको घरमा लग्यो। र तिनले ती भाँडाहरू आफ्ना देवताको खजानामा ल्याए।
3 अनि राजाले आफ्ना नपुंसकहरूका मालिक अश्पेनाजलाई भने, कि उनी इस्राएलका सन्तान, र राजाका सन्तान र राजकुमारहरु मध्ये केहीलाई ल्याउन चाहन्छन्।
४ बच्चाहरु जसमा कुनै दोष थिएन, तर राम्रो मनपर्ने, र सबै बुद्धि मा कुशल, र ज्ञान मा चालाक, र विज्ञान को समझ, र जस्तै कि उनीहरु मा राजा को दरबार मा खडा हुन को लागी क्षमता थियो, र जसलाई उनीहरु सिकाउन र सिकाउन सक्छन्। कल्दीहरुको जिब्रो।
५ अनि राजाले उनीहरुलाई राजाको मासु, र उनले पिएको दाखमद्य को एक दैनिक प्रावधान नियुक्त गरे: उनीहरुलाई तीन बर्ष सम्म पोषण, कि यसको अन्त्यमा उनीहरु राजाको सामुन्ने उभिन सक्छन्।
6 अब यिनीहरु मध्ये यहूदाका छोराहरु, दानियल, हनन्याह, मीशाएल र अजर्याह थिए:
7 जसलाई नपुंसकका राजकुमारले नाम दिए: किनकि उसले दानियललाई बेल्टशस्सरको नाम दियो; र हनन्याह, शद्रक को; र मीशाएल, मेशक को; र अबेरनेगो, Abednego को।
But तर दानियलले आफ्नो हृदयमा योजना बनाएका थिए कि उनी राजाको मासुको अंश वा आफूले पिएको दाखमद्यले आफूलाई अशुद्ध पार्ने छैनन्: यसैले उनले नपुंसकहरुका राजकुमारलाई अनुरोध गरे कि उनी आफुलाई अशुद्ध नपारोस्।
Now अब परमेश्वरले दानियललाई नपुंसकहरु को राजकुमार संग अनुग्रह र कोमल प्रेम मा ल्याउनु भएको थियो।
१० र नपुंसकका राजकुमारले दानियललाई भने, "मँ मेरो मालिक राजादेखि डराउँछु, जसले तपाइँको मासु र तपाइँको पेय नियुक्त गर्नुभएको छ: किन उसले तपाइँको अनुहार तिम्रो बच्चाहरु भन्दा नराम्रो मनपर्ने देख्नु पर्छ? तब तपाइँले मलाई मेरो टाउको राजाको लागी खतरामा पार्नुहुनेछ।
11 तब दानिएलले मेल्जारलाई भने, जसलाई नपुंसकहरूका राजकुमारले दानियल, हनन्याह, मीशाएल र अजर्याहमाथि नियुक्त गरेका थिए,
12 तिम्रा दासहरुलाई प्रमाणित गर, म तिमीलाई बिन्ती गर्दछु, दस दिन; र उनीहरु हामीलाई खाने को लागी पल्स, र पानी पिउन दिनुहोस्।
13 तब हाम्रा सामुन्ने तिमीहरुको सामुन्ने नजर राखीयो, र राजाको मासुको भाग खाने बच्चाहरु को मुहार लाई हेर।
14 त्‍यसैले उहाँ यस विषयमा उनीहरुसँग सहमत हुनुभयो, र उनीहरुलाई दस दिन प्रमाणित गर्नुभयो।
१५ र दस दिनको अन्त्यमा उनीहरुका कुराहरु राजाको मासुको भाग खाने सबै बच्चाहरु भन्दा मासुमा राम्रो र मोटो देखिए।
१ Thus यसरी मेल्जारले उनीहरुको मासुको अंश र उनीहरुले पिउनु पर्ने दाखमद्य लगे। र उनीहरुलाई पल्स दिए।
17 यी चार बच्चाहरु को लागी, भगवानले उनीहरुलाई सबै ज्ञान र ज्ञान मा ज्ञान र सीप दिनुभयो: र दानियल सबै दर्शन र सपनाहरु मा समझ थियो।
१ Now अब ती दिनहरुको अन्त्यमा जब राजाले उनीहरुलाई भित्र ल्याउन भन्नुभएको थियो, तब नपुंसकका राजकुमारले उनीहरुलाई नबूकदनेसरको सामु ल्याए।
19 अनि राजाले उनीहरुसंग कुराकानी गरे। र ती सबैमा दानियल, हनन्याह, मीशाएल र अजर्याह जस्ता कोहि भेटिएनन्: त्यसैले उनीहरु राजाको सामुन्ने उभिए।
२० र बुद्धि र समझ को सबै मामिलामा, कि राजाले उनीहरु लाई सोधपुछ गरे, उसले उनीहरुलाई सबै जादुगरहरु र ज्योतिषीहरु भन्दा दस गुणा राम्रो पायो जो उसको सबै क्षेत्र मा थिए।
२१ अनि दानियल राजा कोरेसको पहिलो वर्षसम्म पनि जारी रहे। ”
दानियल पनि प्रार्थना गर्ने मानिस थिए। डैनियल बेबिलोन मा एक निर्वासित यहूदी थिए, त्यहाँ एक केटा को रूप मा लिईयो, उनी एक कुलीन परिवार को थियो र असाधारण सक्षम र बुद्धिमान थियो। दानियल दुई राजाहरु र पछि अन्त मा राजा दारा को माध्यम बाट बाँचे। राजा दारासले आफ्नो राज्य एक सय बीस प्रान्तमा विभाजित गरे र प्रत्येक प्रान्तमा एक राजकुमार वा शासक नियुक्त गरे। राजकुमारहरु मा राजा दारासले तीन राष्ट्रपतिहरु नियुक्त गरे र राष्ट्रपतिहरु मा राजा दारासले दानियल राखे। यस समय को बारे मा, डैनियल उनको अस्सी मा थियो र उनको स्थिति सिंहासन को लागी उसलाई दोस्रो बनायो। उहाँका तलका राजकुमारहरू र राष्ट्रपतिहरू ईर्ष्यालु भए र ड्यानियललाई बाटोबाट बाहिर निकाल्न चाहन्थे। उनीहरु ड्यानियल संग एउटा गल्ती खोज्न को लागी उच्च र तल्लो देखिन्थे तर उनको चरित्र संग केहि गलत पाउन सकेनन्। के तिनीहरूले ध्यान दिए ड्यानियल आफ्नो भगवान को नियमहरु राखे र लगातार प्रार्थना। कस्तो गवाही! उसको सबैभन्दा खराब दुश्मनहरु पनि दानियल को जीवन मा कुनै गल्ती पाउन सकेनन्। चरित्र पैसा वा यस संसारमा केहि भन्दा धेरै लायक छ। दानियल को चरित्र एकदम सही थियो। उनीहरुको दुष्ट ईर्ष्या को कारण, राजकुमारहरु र राष्ट्रपतिहरु दानियल लाई बाटो बाट बाहिर निकाल्ने योजना बनायो। उनीहरु राजा दाराकहाँ गए र उनलाई यो घोषणा गर्न राजी गराए कि राजा बाहेक अरु कसैलाई प्रार्थना गरे मृत्यु दण्डनीय हुनेछ। यसको मतलब, जो कोहि राजा डेरियस बाहेक अरु कोहिसंग प्रार्थना गर्ने पकडियो, सिंहको गुफामा फालिनेछ।
"Then तब यी राष्ट्रपतिहरु र राजकुमारहरु राजा संग एक साथ भेला भए, र उसलाई यसो भन्यो, राजा दारास, सधैंभरि बाँच।
7 राज्यका सबै राष्ट्रपतिहरु, गभर्नरहरु, र राजकुमारहरु, सल्लाहकारहरु, र कप्तानहरु, एक शाही कानून स्थापित गर्न को लागी एक साथ परामर्श गरीएको छ, र एक दृढ डिक्री बनाउन को लागी, कि जो कोहि को लागी कुनै भगवान वा मानिस को निवेदन माग्नु पर्छ। तीस दिन, हे राजा, तपाइँ बाहेक, उहाँ सिंहको गुफामा फालिनुहुनेछ।
दानियल प्रार्थना गर्न बन्द गर्न सक्थे। उहाँ लुक्न सक्नुहुन्थ्यो, तर दानियल एक कमजोर ईसाई थिएनन्! उहाँसँग नैतिक क्षमता र साहस थियो! उहाँ साँचो भगवानलाई प्रार्थना गर्दै घुँडा टेकेर बस्न लाज मान्नुहुन्नथ्यो।
दानियल 6: 10-11
१० अब जब दानियललाई थाहा भयो कि लेखमा हस्ताक्षर भएको छ, उनी आफ्नो घर गए। र उसको झ्यालहरु यरूशलेम तिर आफ्नो कोठा मा खुल्ला भएको थियो, उसले दिन मा तीन चोटि घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्यो, र उसको भगवान को लागी धन्यवाद दिईयो, जस्तै उसले पहिले गरेको थियो।
11 तब ती मानिसहरू भेला भए, र दानियलले प्रार्थना गर्दै र उहाँको परमेश्वरको सामु बिन्ती गरिरहेका भेटे। ”
डैनियलले ईश्वरलाई धेरै माया गर्थे कि उनी आफ्नो झ्याल खोल्न र प्रार्थना गर्न को लागी डराएनन् जस्तो कि उनले विगतको समयमा गरेका थिए। हामी भेट्टाउँछौं कि राजकुमारहरूले तुरुन्तै राजा डारायसलाई दानियलले के गरेका थिए भन्यो। राजा दानियललाई माया गर्थे र दुखी थिए कि उनले दानियललाई सिंहको गुफामा फ्याँक्नु परेको थियो। दानियल डराएनन् किनभने उनी विश्वास गर्थे कि भगवानले उहाँलाई बचाउनुहुनेछ। दानियललाई लाग्यो कि भगवानसंग प्रार्थना यति महत्त्वपूर्ण छ कि उनी यसको लागी आफ्नो जीवन दिन को लागी तयार थिए।
प्रार्थना केहि चीज हो जुन हामी हरेक दिन गर्न को लागी छ। मँ एक युवा व्यक्ति को रूप मा तपाइँ प्रार्थना मा भगवान संग समय बिताउन सुनिश्चित गर्न को लागी चुनौती दिईरहेको छु।
"Nothing कुनै कुराको लागि सावधान रहनुहोस्; तर हरेक कुरा मा धन्यवाद र प्रार्थना संग बिन्ती गरेर तपाइँको अनुरोध भगवान लाई थाहा दिनुहोस्। "